Izikhwama "Dior" - Classic ukuthi uhlale in fashion
Namuhla, wonke umuntu uyazi igama umklami kanye isikhwama "Dior" has wezigqoko zonke umphakathi lady. Futhi abakholelwa ngisho ukuthi wayeyisazi Christian Dior, ukhanda wamomotheka ngesikhathi esisodwa. Impumelelo walinda isikhathi eside futhi kanzima ukufeza amaphupho abo.
"Dior" isikhwama, kanye nezinye yobuciko we womculo abakhaliphile akazange avele ngokushesha. Ikusasa wengqephu futhi sivumele isishaya-mthetho we fashion French wazalelwa emndenini ocebile. Abazali bakhe babemthanda kakhulu kunquma Isiphelo sakhe - Christian kwakufanele abe usomaqhinga. Le ndoda kakhulu efanayo ephupha ubuciko, ufuna ukuba umculi, kodwa walahlekelwa.
Phakathi nezifundo yakhe, wayeshilo ukuthi ngihlangane nomunye lwamaGypsy wabikezela ukuthi Dior has a ikusasa okukhulu. Phakathi kwezinye izinto, wathi, ukuthi ubumpofu asisindise vele abesifazane abangamaKristu. Le nsizwa ayizange ukuthatha ngokungathí sina isiprofetho, kodwa ke ayevame ukucabanga kwakhe, ngoba zonke zizogcwaliseka. Dior lokuqala ivula ukuhweba isitolo esincane. Izinto zazihamba kahle, kuze ngomzuzu nje konke zigoqiwe: esitolo ivaliwe, uyise, ukukhohliswa uzakwethu, waya ukuphelelwa yimali, unina eshona, futhi ikhanda lakhe omkhaya.
Yisimo ophoqelelwe abangamaKristu ukuba bangenele umsebenzi akwenzayo engcono. Ngaleso sikhathi, yebo, zazingekho izikhwama "Dior", kodwa emhlabeni fashion sasondelana: akudalile imidwebo izigqoko for omagazini fashion. Ngemva kwempi, wayesalokhu ephethwe ukuze uqaphele iphupho lakhe - ukukhombisa izwe iqoqo lalo.
Ukuze bathi izilaleli zajabulela - alisho lutho. Bazophela amandla grey zokuphila kwansuku zonke futhi ukubhujiswa empini, amasudi abo futhi kusilela, abesifazane wema emangele. Phela, Christian Dior wakunikela ukuzama izingubo okunethezeka ngemibala egqamile, izingubo ezisesitayeleni futhi njengabesifazane. UMklami lokuqala yabhekisela lokuthi isithombe has ibe ephelele, kodwa ngoba lakhiwa hhayi kuphela izingubo, kodwa futhi izicathulo, amakha, izimonyo. Namuhla, imfashini endlini yakhe kubhekwa okungcono emhlabeni, futhi abalandeli abaningi sha kukhona iwubufakazi balokho.
Ngakho-ke yini ekhethekile ngalezi izesekeli, okuyinto abesifazane abayeki ukuthenga manje kweminyaka eminingi kangaka? Okokuqala, kuba umuzwa isitayela ephelele, Finesse yonke imininingwane, passion for umsebenzi esiyitholayo. Okwesibili, ukusebenziseka nokusebenza nge isitayela umusa nesifazane. Futhi okwesithathu, kuba nombala scheme ocebile, futhi ezihlukahlukene ukwakheka ukuthi angamjabulisa fashionista. izesekeli design njalo ihlangabezana fashion Amathrendi zamuva, umoya isikhathi, nakuba ngezinye izikhathi uhlala phezu kwakhe, njengoba zabuna njalo efanele. Enye Kuyaphawuleka ukuthi le isikhwama "Dior" (wokuqala) is high kakhulu. edume brand abaklami basebenzisa kuphela izinto best - lesikhumba yemvelo kanye Suede, ifenisha ukusebenza ezehlukile.
onobuhle okudume kakhulu
Izikhwama "Dior" Izibuyekezo kukhona nomdlandla kakhulu. Ifa we engumFulentshi abadumile, kukhona izesekeli eziningi, kodwa kukhona tinkhulumo, ngempela. Abesifazane emhlabeni wonke athande esikhwameni Lady Dior, yaqanjwa ongenakulibaleka Princess Diana. Kungathatha nawe futhi iqembu, futhi ukusebenza. Eyesibili ethandwa kakhulu - Miss of Dior, isikhwama unxande nge izibambo eside, nezigqizo, ephelele kusihlwa. Ukuze osaziwayo wokuziphilisa kwansuku belokhu beqhubeka bekhetha Dior Diorissimo.
Kodwa hhayi osaziwayo kuphela simdumise izesekeli Brands "Dior". Emigwaqweni imizi ungahlala ukuhlangabezana abesifazane obubusa izandla iyingqayizivele encane ka Haute Couture. Yiqiniso, akuwona wonke umuntu angakwazi ukukhokhela komkhiqizo wangempela, avame lifana ncamashi. Kodwa ikhophi ezinhle hhayi kakhulu eliphansi kuya imikhiqizo uphawu ngesikhathi esifanayo inama intengo imali. abanikazi Happy we izikhwama yokuqala batusa it bonke ubulili fair, athi usuke nesisekeli ukuthi akanayo icala elilodwa.
Indlela ukukhetha inhlanganisela imibala nezinye imibala izingubo?
Iziphi izicathulo ezingavamile ezakhiwe ngabaklami zanamuhla?
"Stockmann" Petersburg ivula iminyango yayo kumakhasimende
Imfashini izimbadada sesithende esiphezulu: imodeli, inhlanganisela zokugqoka kanye nezincomo
Izitolo "Bershka" eMoscow kulabo bayakwazisa okwakhe, izinga nokutholakala
Isambulela Zest - Ukuvikelwa esihle sezulu esibi
Le mfundiso eyasungulwa ethi ezithaka imithi "Tsefatoksin". Yokusetshenziswa
Uju ukugoqa neminye: ukubuyekezwa kanye nemiphumela. Uju ukugoqa neminye ekhaya: incazelo yenqubo
Sony Xperia V: impendulo. Sony Xperia V: smartphone. Sony Xperia V: ifoni
Izimpawu pneumonia e ingane 2 ubudala umkhuhlane ngaphandle imfiva
Van goga oeuvre. Ngubani umbhali wencwadi mdwebo "The Scream" - Munch noma Van Gogh? Umdwebo "The Scream": incazelo
Inzuzo Gross: ukuthi kuyini nokuthi ukubala
Isikhumba se-buckwheat nesitshalo: iresiphi yokupheka esitofu naseminjini-
Kirov, Sosnovi Bor (sanatorium): incazelo, izinsizakalo, oxhumana nabo kanye nezibuyekezo
Winter amathayi "Hankook": ukubuyekezwa, Ukucaciswa, ukuhlolwa
Indlela yokunciphisa ubuhlungu empini - izindlela ezilula kodwa eziphumelelayo!
Izihloko ezithakazelisayo ngayo esingakhela kuyo ingxoxo nentombazane nabangane